Nkagbu na nkwụghachi amụma - Institutelọ Akwụkwọ Agụmakwụkwọ Asụsụ
Home atumatuNkagbu na nkwụghachi iwu
EKPERE BEIEL SITE:
Ọjụjụ nke Ngwa
Ọ bụrụ na BEI anabataghị ngwa gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ajụrụ arịrịọ visa F-1 gị, BeI ga-akwụghachi ụgwọ niile a kwụrụ, ewezuga ego ndebanye aha.
Kagbuo Mmemme - Mmemme niile
Ọ bụrụ na BEI kagburu klas nke amalitebeghị, ị ga-akwụghachi nkwụghachi ego niile.
Y’oburu na BEI kagbuo klas nke bidoro, a ga-eweghachi nkwụghachi nke nkuzi a na-ejighi ya. Nkwụghachi nkwụghachi ụgwọ a ga-agbakọ dabere na ọnụego izu a ebipụtara.
BEI nwere ikike ịkagbu klaasị n'oge ọ bụla.
Nkagbu na-amụrụ ihe na enweghị ngosi - Mmemme niile
Ọ bụrụ ngbanahụ mmemme gị tupu ụbọchị izizi nke nkwekọrịta gị amalite ma ọ bụ na ị ga-abanye klaasị (enweghị ihe ngosi), BEI ga-akwụghachi ụgwọ niile a kwụrụ, belụsọ ụgwọ ndebanye. *
* Ọ bụrụ na onye anamachọ ihe nabatara BEI na-abanye na United States n'ụdị I-20 nke enwetara site na BEI na nke mechara mkpọtụ tupu mmalite nke usoro ememme ma ọ bụ na-abanyeghị klaasị (enweghị ihe ngosi), BEI nwere ikike idowe ebubo niile ọdabara. ruo izu isii izizi nke oge ndebanye aha mbụ. (Ntinye akwụkwọ nwata akwụkwọ I-20 mbụ bụ izu iri na anọ). Nkwụghachi nkwụghachi ụgwọ a ga-agbakọ dabere na ọnụego izu a ebipụtara.
AKWFKWỌ EZI BEI:
Drawepu - Ihe Mmemme niile - Studentsmụ akwụkwọ debanyere aha mbụ
Ogologo oge ndebanye: 4 izu ma ọ bụ obere
Ọ bụrụ na ịgbanahụ na mmemme gị, BeI nwebeere ikike idowe ụgwọ akwụkwọ nkuzi niile.
Ogologo oge idebanye aha: izu ise +
Ọ bụrụ n'iwepu mmemme gị n’ime izu anọ izizi klaasị gị, BEI ga-ejide izu anọ izizi akwụkwọ na ụgwọ dịka ego akwụgaghị akwụghachi. Will ga-etozu maka nkwụghachi nkuzi prorated na izu ụka ọ bụla fọrọ afọ. Nkwụghachi nkwụghachi ụgwọ a ga-agbakọ dabere na ọnụego izu a ebipụtara.
Ọ bụrụ na ịhapụ usoro ihe omume gị mgbe izu anọ nke klaasị gasịrị, mana tupu ma ọ bụ n'etiti etiti oge mmemme gị, ị ga-eru eru maka nkwụghachi dabere na ngụkọta ego nke izu ndị a na-ejighi eji nke usoro ihe ọmụmụ gị. A ga-agbakọ nkwụghachi a ka ọ bụrụ ụbọchị ikpeazụ ị dekọtara. A ga-agbakọ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ agụmakwụkwọ dabere na ọnụego izu a na-ebipụta kwa izu.
Ọ bụrụ na ịgbanahụ na mmemme gị mgbe ọkara nke klas gị gasịrị, ị gaghị enweta ụgwọ nkwụghachi.
Drawepu - Ihe Niile Mmemme - Studentsmụ Akwụkwọ Na-esote Debanye aha
Ọ bụrụ na ị wepụrụ mgbe emechara aha ndebanye mbụ ahụ mana tupu ma ọ bụ n'etiti oge agụmakwụkwọ ọ bụla ga-esochi, BEI ga-ejide ego izizi maka oge ahụ. Nkwụghachi nkwụghachi ụgwọ a ga-agbakọ dabere na ọnụego izu a ebipụtara.
Ọ bụrụ na iwepụrụ oge oge ntinye akwụkwọ ọ bụla gafere, BeI ga-ejide nkuzi niile maka oge ahụ.
Usoro ncheta BeI:
A ga-eweghachi nkwụghachi ụbọchị iri atọ (30) ụbọchị kalinda nke mkpebi siri ike site na kagbuo gị, ma ọ bụ wepu oge aha.
Ọ bụrụ na edebanye aha nwa akwụkwọ site n'aka onye ọrụ ikike, nkwụghachi ga-enye ndị ọzọ kwụrụ ụgwọ maka nwa akwụkwọ ahụ. Ọ bụrụ na onye na-elekọta gị kwụrụ ụgwọ naanị, ọ bụ ọrụ nwata akwụkwọ ịkpọtụrụ onye na-elekọta gị ozugbo maka nkwụghachi ụgwọ ọ bụla. BEI anaghị ahụ maka azụmahịa ọ bụla emere n'etiti ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ ha.
Mgbe ị na-ekpebi ọnụọgụ izu, BEI ga-eleba anya na-eleba anya na izu dịka otu izu zuru ezu, ma ọ bụrụ na nwa akwụkwọ a nọrọ ma ọ dịkarịa ala otu ụbọchị n'izu ahụ.
Ọ bụrụ na nwata akwụkwọ na ezumike ahapụla ịmaliteghachi ọmụmụ, a ga-ahazi nkwụghachi (ma ọ bụrụ na ọdabara) dịka amụma nkwụghachi nke BEI si dị.
Ọ bụrụ na nwa akwụkwọ nke bidola klaasị pụọ tupu mezue usoro nkwekọrịta ha, nwata akwụkwọ ahụ agaghị anata ego nkuzi ọbụla maka ọmụmụ ihe ndị ahụ gara. Kama nke ahụ, a ga-akwụ ụgwọ nkuzi ahụ n'oge ọnụego maka oge emechara niile ma kagbuo ụkpụrụ na nkwụghachi ụgwọ ga-emetụta oge nnọkọ ọ bụla bịara.
Plankwụ Plangwọ Paymentkwụ Paymentgwọ bụ nke a na-agaghị akwụghachi.
Ntuziaka maka nyocha & ịmezu usoro mmemme pụrụ iche:
Iji hazigharị klaasị, achọrọ ụmụ akwụkwọ Mmemme Pụrụ Iche inye ọ dịkarịa ala, awa iri na abụọ tupu klas ahụ emee. Ọ bụrụ n’ịgaghị klaasị ememme gị, ma ọ bụ ịrịọ ka ịmalitegharịa na ihe na-erughị elekere elekere iri na abụọ, ị ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa maka klas ahụ niile enyere gị aka.
Enwere ike ịmalitegharia Semi-n'onwe na ọgbakọ otu ọ gwụla ma ụmụ akwụkwọ niile kwenyere ịmalitegharị klaasị ma ọ dịkarịa ala elekere 24.
Oge ọ bụla (nkeji iri abụọ) nke izi nkuzi nke ọkara ma ọ bụ nkeonwe ga-agwụrịrị n'ime otu narị ụbọchị asatọ na iri asatọ (20) site na ụbọchị ebido klas ahụ. Nwa akwụkwọ a ghahapụrụ ọnụ ọgụgụ nke oge emezughi n'ime otu narị ụbọchị asatọ (180).